Izindaba - Ukuvuselelwa kwemakethe yensimbi yaseChina kuyaqhubeka
Ukuvuselelwa kwemakethe yensimbi yaseChina kuyaqhubeka, phakathi kwemizabalazo yomhlaba
Ubhadane lwe-coronavirus ludale umonakalo omkhulu ezimakethe zensimbi nakwezomnotho emhlabeni wonke, ezinyangeni eziyisithupha zokuqala zonyaka wezi-2020. Umnotho waseChina waba ngowokuqala ukuhlupheka ngenxa yokuvalwa okuhlobene neCovid-19. Ukukhiqizwa kwezimboni zezwe kwehle kakhulu, ngoFebhuwari walo nyaka. Kodwa-ke, ukululama okusheshayo kuqoshwe kusukela ngo-Ephreli.
Ukuvalwa kwamayunithi wokukhiqiza, eChina, kuholele ekutheni izingqinamba zokuthengwa kwezimpahla zizwakale kuwo wonke amazwekazi, kuyo yonke imikhakha edla insimbi. Akukho okunye okudlula lokhu embonini yezimoto, ebisivele ilwela ukubhekana nezinqubo ezintsha zokuhlola kanye nokuthuthela ezimotweni eziluhlaza, ezonga amandla.
Umphumela kubakhiqizi bezimoto zomhlaba wonke uhlala ungaphansi kakhulu kwamazinga wangaphambi kobhubhane, yize kuncishiswa imikhawulo ebekwe nguhulumeni emazweni amaningi. Isidingo salesi sigaba sibalulekile kubakhiqizi abaningi bensimbi.
Ukuvuselelwa emakethe yensimbi, eChina, kuyaqhubeka nokuhlangana, yize kuqala isikhathi semvula. Isivinini sokululama singanikeza izinkampani zaseChina ithuba lokuqala lapho abathengi bomhlaba wonke bebuyela emakethe, ngemuva kwezinyanga zokuhlala ekhaya. Kodwa-ke, isidingo esikhulayo sasekhaya, eChina, kungenzeka sithathe okuningi okhuphukile komkhiqizo.
Insimbi iphula i-US $ 100 / t
Ukukhuphuka komkhiqizo wensimbi waseChina, muva nje, kube nomthelela ezindlekweni zensimbi ezihamba ngaphezu kwe-US $ 100 ngethani. Lokhu kuletha ingcindezi engemihle emaphethelweni enzuzo yemishini ngaphandle kweChina, lapho isidingo sihlala sithulisiwe namanani entengo yensimbi ebuthakathaka. Yize kunjalo, ukukhuphuka kwemali yokufaka kunganikeza abakhiqizi umfutho wokuqhubekela phambili ekukhuphukeni kwentengo yensimbi edingeka kakhulu, ezinyangeni ezizayo.
Ukululama emakethe yaseChina kungaveza indlela yokuphuma kokwehla okubangelwa yi-coronavirus emkhakheni wensimbi womhlaba jikelele. Wonke umhlaba ungemuva kwejika. Yize imvuselelo kwamanye amazwe ibukeka ihamba kancane, kunezimpawu ezinhle okufanele zithathwe ekushintsheni kweChina.
Izintengo zensimbi kungenzeka zihlale zingashintshi, engxenyeni yesibili yonyaka we-2020, njengoba kulindeleke ukuthi indlela eya ekubuyiseleni ingalingani. Isimo emakethe yomhlaba wonke singase sibe sibi kakhulu ngaphambi kokuba sibe ngcono. Kuthathe iminyaka eminingi ukuthi umkhakha wensimbi uphinde uthole indawo elahlekile, kulandela inkinga yezimali ka-2008/9.
Tct Isiyingi Saw Blades, Ithuluzi Elisebenzayo Lensimbi Elishubile Ibha Flat, Hss M35 Isiyingi Saw Blades, Tct Isiyingi Saw Blade, Tct Isiyingi Saw Blade Yensimbi, Hss M2 Isiyingi Saw Blades,